Dalxiiska Seychelles "Wadada Wadada Sanadlaha ah ee Waqooyiga Ameerika" ayaa Socota
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles “Wadada Waqooyiga Ameerika ee Wadada Sannadlaha ah” waxaa ku socda Virtual
Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Seychelles “Wadada Waqooyiga Ameerika ee Wadada Sannadlaha ah” waxaa ku socda Virtual
Dalxiiska Seychelles waxay ku qasbaneyd inay waxyaabo kala duwan u qabato sannadkan "Waqooyiga Ameerika ee Wadada Wadada" COVID-19 awgeed Ka dib maqnaansho 2 sano ah, waddada, oo inta badan u safreysa 4 magaalo oo Mareykan ah, ayaa la sameeyay ku dhawaad ​​Arbacadii, Juun 25, iyo guushii ka dib, munaasabad labaad ayaa la qaban doonaa Arbacada, Ogosto 18, 2021.
Dalxiiska Seychelles ayaa si guul leh u soo bandhigay Sanad -guuradeedii Jidadka Waqooyiga Ameerika qaab qaabaysan sannadkan.
Waxaa jiray 65 xirfadlayaal socdaal oo Maraykan ah oo ka soo qaybgalay magaalooyinka Maraykanka si ay u yeeshaan kulan wax -soo -saar iyo is -weydaarsi maalin wax -soo -saar leh.
Dhammaan dadka ay khusayso waxay u arkeen inay tahay dhacdo togan oo ka soo horjeedda 2 sano ka hor markii la baajiyay iyada oo aan la beddelin sababtuna tahay COVID-19.
Ku biirista adduunka intiisa kale qaadashada aaladaha dhijitaalka ah si ay u gaaraan lamaanayaashooda, hawlwadeennada dalxiiska maxalliga ah ee ka socda Seychelles, oo ay ku jiraan Socdaalka Mason, Adeegyada Socdaalka Creole, iyo shirkadda duulimaadka Qatar Airways time) 7 -kii Juun, markii ay ku biireen 9 xirfadlayaal socdaal oo Mareykan ah oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo Mareykan ah maalin wax soo saar leh oo shirar iyo is -weydaarsi ah.
Ka dib soo dhaweyn diiran oo ka timid Dalxiiska Seychelles kooxda, ka-qaybgalayaashii iyo soo-bandhigayaashii waxay sii wadeen inay qabtaan shirar hal-qof ah oo ay is-weydaarsadeen macluumaad ku saabsan xaaladaha suuqa ee hadda jira, hab-raaca badbaadada oo ay fulinayaan daneeyayaasha maxalliga ah ee Seychelles iyo sidoo kale horumarrada la xiriira badeecadaha cusub ee ku wajahan meesha loo socdo.
Bandhigga waddooyinka ayaa la qabtay markii ugu horreysay tan iyo 2018 ayuu yiri Agaasimaha Dalxiiska Seychelles ee Afrika & Ameerika, David Germain. "Sannadihii 2019 iyo 2020, ma aynaan awoodin inaan sii wadno bandhigga waddooyinka, laakiin maadaama masiibadu sii socoto, waxaan go'aansannay inaan munaasabadda si wanaagsan u qabanno, si aan ugu qanacno dhammaan shuraakadayada ganacsiga iyo ka -qaybgalayaashii ka qayb -qaatay," ayuu yiri Mr. Germain.
Xiisadda Seychelles weli wey ka sarreysaa Mareykanka inkasta oo uu cudurku faafa yahay, wuxuu xaqiijiyey, gaar ahaan dadka safarka ah ee ku sii qulqulaya dalal ka fog Afrika iyo Bariga Dhexe oo fasax ku jira, ka dibna u safraya Seychelles si loogu kordhiyo fasaxooda. 1,934 booqde oo ka socda Mareykanka ayaa booqday Seychelles illaa iyo sannadkan illaa 18ka Luulyo.